Page2of 3	21. နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ ၀၁.၀၄.၂၀၁၇	(2016)
သမ္မတ ဘရာ့ခ် အိုဘားမားဟာ ဒီကနေ့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုသွားပြီး သူ့ရဲ့သမိုင်းဝင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကို ကာကွယ်ရေး ဒီမိုကရက်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ရှိ၊ တူရကီနိုင်ငံ၊ ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၆၉ နှစ်မြောက် ...	Created on 04 January 2017	22. မကွေးတိုင်းအစိုးရနဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေ တွေ့ဆုံ	(2016)
... သိရပါတယ်။ မနေ့က တွေ့ဆုံပွဲကို မကွေးနဲ့ ပခုက္ကူမြို့တွေက ဝိဇ္ဇာ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် စတဲ့ တက္ကသိုလ် ၈ ခုက ကိုယ်စားပြုသူ ၈ ယောက် ...	Created on 03 January 2017	23. Eleven CEO နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် တို့ လျှောက်ထားတဲ့ အာမခံ ပယ်ချခံရ	(2016)
... ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ ဦးဝေဖြိုးတို့ လျှောက်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက် က ဆေးရုံထောက်ခံချက်... ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)နဲ့ တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ...	Created on 30 November 2016	24. အစိုးရအဖွဲ့သစ်အတွက် ဝန်းကြီးရာထူး ၂ နေရာ Trump အမည်တင်သွင်း	(2016)
သမ္မတ Barack Obama ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်သစ်ကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်တဲ့ Georgia ပြည်နယ်က အောက်လွှတ်တော်အမတ် Tom Price ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုဝန်ဆောင်မှုဝန်ကြီးအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။Authors: ...	Created on 30 November 2016	25. အမေရိကန်သမ္မနဲ့ အသက်အရွယ်	(2016)
ရွေးကောက်ခံသမ္မတ Donald Trump ဟာ ဇန်နဝါရီလထဲ တရားဝင်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးရင်တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အသက်အကြီးဆုံးသမ္မတ ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ အသက်အရွယ်ကြောင့် သမ္မတတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ဖို့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အားမရှိနိုင်ဘူးလို့ ...	Created on 28 November 2016	26. NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တချို့လွှတ်တော်ရေးရာကော် မတီတာဝန်တွေကနေ ဖယ်ရှားခံရ	(2016)
... ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာအောင်ခင် အပါအဝင် ၅ ဦးကို ကော်မတီဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာအောင်ခင် ကိုတော့ ...	Created on 28 November 2016	27. ဆီးချိုသွေးချိုနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအကျိုး	(2016)
... အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း ဒေါက်တာသန့်ဇော်က လူထုနဲ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာတင်ပြပါမယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... လမ်းလျှောက်တာအပါအဝင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ ကျမ်းမာရေးအတွက် တကယ်ကို အကျိုးများပါတယ်။ ...	Created on 27 November 2016	28. သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဘယ်လိုကာကွယ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သလဲ	(2016)
... ဘယ်လိုလုပ်သွားကြရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာတွေကို သြစတေးလျနိုင်ငံအခြေစိုက် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုသမားတော်ကြီး Dr. Raymond တင့်ဝေ ၊ ပထမအကြိမ်လွှ...မြန်မာပြည်မှာ အခုတလောကြားနေရတဲ့ စိတ်မချမ်းသာစရာ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု၊ ...	Created on 26 November 2016	29. အားကစားလုပ်ရာမှာ ရောဂါအခံရှိသူတွေ သတိပြုရန်	(2016)
နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆ - ဘယ်လိုရောဂါ ရှိထားသူတွေမှာ အားကစား ပြင်းပြင်းထန်ထန် နဲ့ လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါလဲ။ အားကစားလုပ်ရာမှာ ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်ပါလဲ။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆ ...	Created on 24 November 2016	30. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ WHO အကြံပြုချက်	(2016)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ အနေနဲ့ သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အကြိမ် နှစ်ဆ တိုးဖို့ WHO အကြုံပြုထားပါတယ်။ ကလေးနဲ့မိခင် သေဆုံးမှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့ အတွက် ...	Created on 22 November 2016	31. ဇီကာတိုက်ဖျက်ရေး မြန်မာ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးကြောင်း WHO အရာရှိပြော	(2016)
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဇီကာဗိုင်းရပ်ပိုး တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တဦးက ပြောလိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... မြန်မာနိုင်ငံဟာ ...	Created on 21 November 2016	32. အရိုးပွရောဂါ	(2016)
... ကြိုတင်စစ်ဆေးသင့်တဲ့အကြောင်းတွေကို ဒေါက်တာသန့်ဇော်က လူထုနဲ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ တင်ပြထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ Read more http://burmese.voanews.com/a/3602860.html ...	Created on 20 November 2016	33. မြန်မာပြည်မှာသုံးနေဆဲ မီးခံပြားကျောက်ဂွမ်း ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်	(2016)
မြန်မာနိုင်ငံက အထင်ကရနေရာတွေ အပါအဝင် အဆောက်အဦးတွေမှာ Asbestos လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်ဂွမ်းတွေကို အသုံးပြုမှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် လူတွေကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေက သတိပေးလိုက်ကြပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 18 November 2016	34. တုပ်ကွေးအန္တရာယ် WHO သတိပေး	(2016)
အအေးမိရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်း တိုးမြှင့်ထောက်ပံ့မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း အအေးမိရောဂါဟာ ကပ်ရောဂါတခုအဖြစ်နဲ့ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ...	Created on 18 November 2016	35. လမစေ့ပဲမွေးဖွားတဲ့ကလေးများနေ့ မဲဆောက်မှာ ကျင်းပ	(2016)
... နည်းပညာအကူညီနဲ့ ကလေးတွေကိုအသက်ရှင်အောင် လုပ်နိုင်တာကြောင့် မယ်တော်ဆေးခန်းရဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဌာနကိုလည်း ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးခဲ့တယ် လို့...လမစေ့ပဲမွေးဖွားတဲ့ကလေးများနေ ့ကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ CPI ...	Created on 17 November 2016	36. ဒေါက်တာစင်သီယာ ၂၀၁၆ လူသားချင်းစာနာမှု သူရဲကောင်းဆု ချီးမြှင့်ခံရ	(2016)
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်ရှိ မဲတော်ဆေးခန်းအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ လူမှုရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ ကာလပတ်လုံး ဆက်လက် ရပ်တည်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ...	Created on 17 November 2016	37. မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်ရေး ဆွေးနွေး	(2016)
... ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် မြန်မာ အစိုးရက ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အရေးကြီးတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာ ကို ဆွေးနွေးတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ...	Created on 16 November 2016	38. ဓါတုဆေးဝါးပါသည့် အစားအသောက်များ - အပိုင်း (၂)	(2016)
အစိုးရအသစ် ပြောင်းသွားပေမယ့်လည်း စားသောက်ကုန်တွေထဲမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဓါတု ဆေးဝါးတွေပါနေတဲ့ကိစ္စကို ထိရောက်စွာ အရေးယူ ကိုင်တွယ်ဘို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ...	Created on 15 November 2016	39. အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ ဘီပိုး စီပိုး	(2016)
... ဒေါက်တာသန့်ဇော်က လူထုနဲ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ တင်ပြထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... အသည်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး အသည်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အခြေအနေများစေတဲ့ထဲမှာ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ...	Created on 13 November 2016	40. တီဘီရောဂါပြင်ပလူနာ ဌာန လေးထပ်အဆောက် အအုံသစ်ကို 3MDG ဆောက်လုပ် မည်	(2016)
... ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုတွေပေးနေတဲ့ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အဲဒီရန်ပုံငွေကို သြစတေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က ကူညီပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ...	Created on 12 November 2016	StartPrev123NextEnd